Fitantanana ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany | Reef Resilience
Paikady amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany mba hanatratrarana tsara kokoa ny tanjon'ny faharesen-dahatra eo an-toerana
Mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana sy ny fiaraha-monina eo an-toerana ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany. Ny fiantraikany ratsy mivantana avy amin'ny mpizaha tany amin'ny toerana misy ny haran-dranomasina dia mety ahitana ny fanitsakitsahana ny haran-dranomasina sy ny dunes, ny fitomboan'ny loto, ny fahasimbana mifandray amin'ny sambo, anisan'izany ny fahasimban'ny vatofantsika, ny fipetrahan'ny sambo, na ny fifandonana amin'ny karazam-biby an-dranomasina, ary ny fampidirana ireo karazam-biby manafika. Ny fiovan'ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany sy ny fanovana ny fenitra ara-tsosialy amin'ny toerana dia mety hampihena ny voka-dratsin'ny fizahan-tany amin'ny tontolo iainana ary hanatsara ny tombontsoa ho an'ny vatohara sy ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Ny lohahevitra nodinihina nandritra ny fifanakalozam-baovao 2021 dia nahitana fomba mety handresena lahatra, famporisihana, na ahafahan'ny mpizaha tany manova ny fitondran-tenany.
Zava-dehibe ny mahatakatra ny atao hoe fitondran-tena. Ny fitondran-tena dia fihetsika azo jerena - izay hitanao ataon'ny olona iray - fa matetika ny olona no afangaro izany amin'ny fihetsika, fahatsiarovan-tena, fahatsapana, soatoavina, na maha-izy azy. Noho izany, ny fiovan'ny fitondran-tena dia ny fahitana ny fiovan'ny fihetsiky ny olona iray.
Ny dingana kely fanampiny mandritra ny fotoana maharitra dia takiana mba hanovana ny fitondran-tenan'ny olona sy hanova ny fenitra ara-tsosialy. Afaka manampy amin'ny fanatanterahana ireo fiovana ireo ny mpitantana ny haran-dranomasina amin'ny fifantohana amin'ny fihetsiky ny olona. Betsaka ny zavatra misy fiantraikany amin'ny fitondran-tenan'ny olona, ​​anisan'izany ny toe-tsaina, ny fahaiza-manao, ny fahafahana, ny fitsipika ara-tsosialy, ary ny fitaoman'ny tsy fahatsiarovan-tena: ny toe-javatra, ny fitongilanana, ny fihetseham-po ary ny fahazarana. Noho izany, satria mampahafantatra na manabe olona iray ianao dia tsy midika fa hanova ny fitondran-tenany izy ireo.
Fantaro ary farito ny fihetsika tena tianao hovana. Tohizo ny fandavahana ary mahaiza manokana (izany hoe, iza, aiza, oviana, inona) momba ny fitondran-tena satria manampy amin'ny tanjona izany.
Fantaro ny fitondran-tena, ny mpamily ao ambadik'izany, ary ny fomba fijerin'ny olona izay ezahinao ovaina ny fihetsikao.. Ny antony manosika anao hitondra tena amin'ny fomba iray dia mety tsy hanosika olon-kafa manana traikefa eo amin'ny fiainana. Andramo ny mahatakatra ny fitondran-tena amin'ny fomba fijerin'ny mpihaino, ary avy eo mamolavola fandaharana fanovana fitondran-tena izay mifanaraka amin'ny zavatra azontsika ankehitriny amin'ny fomba fijerin'ny mpihaino.
Hanampy hanova ny fitondran-tenan'ny olona: 1) Ataovy tsotra ny hafatra ary mifantoha amin'ny vokatra fa tsy amin'ny siansa sarotra, 2) Mampiasà tompon-daka eo an-toerana (ohatra, mpitondra fiangonana na olona fanta-daza eo amin'ny fiaraha-monina), ary 3) Mampiasà antoka (na zavatra mitovitovy) mba hahatonga ny hafatra ho toy ny mahazatra. . Jereo ohatra ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaofanentanana fanovana fitondran-tena ary mijery webinar momba ny 4Fiji Campaign.
Amporisiho hatrany ny fanao tsara indrindra eo amin'ny fiaraha-monina. Zava-dehibe ny fampiroboroboana hatrany ny fomba fanao tsara indrindra sy ny fifampiresahana maharitra mba hampidirana am-pahombiazana ny hafatra ao amin'ny vondrom-piarahamonina sy hanovana ny fenitra ara-tsosialy. Azo atao amin'ny sehatra maro samihafa izany, ary raha vita soa aman-tsara izany dia tsy ilaina intsony ny famatsiam-bola ho an'ny fiovan'ny fitondran-tena.
Amporisiho ny fanentanana any amin'ny sekoly eo an-toerana. Mba hampiasana amim-pahombiazana ny mpianatra dia lazao manokana ny karazana fitondrantena tianao ovaina satria ny ankizy dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanovana fitondran-tena sasany amin'ny olon-dehibe, fa tsy ny hafa.
Hamaly hafatra samihafa ireo mpizahatany eto an-toerana sy iraisam-pirenena/lavitra. Ny mpitsidika eo an-toerana dia mety hamaly tsara kokoa ny hafatra momba ny lanjany sy ny maha-izy azy ny toerana, raha ny mpizahatany iraisam-pirenena/lavitra kosa dia mety hamaly tsara kokoa ny hafatra momba ny fanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika.
Spotlight New Caledonia
Ahoana no ahafahantsika mampandroso maharitra ny sehatry ny fizahantany?
Sary © Amy Armstrong
Ny Lagoons of Nouvelle-Calédonie any Pasifika Atsimo dia manana haran-dranomasina mirefy 1,574,300 ha ary lasa vakoka iraisam-pirenena UNESCO tamin'ny taona 2008. Na dia voatondro ho mpitarika manan-danja amin'ny toekarena aza ny fizahan-tany, dia indostria kely mandroso izy io amin'izao fotoana izao izay tsy misy afa-tsy eo ho eo. 4.1% amin'ny harinkarena faoben'i Nouvelle-Calédonie.
Nouvelle-Calédonie dia mitady fomba famoronana hampitomboana ny sehatry ny fizahantany mba hahazoana fidiram-bola sy hanohanana ny fivelomana amin'ny fomba maharitra. Eo am-pampitomboana ny sehatry ny fizahan-tany, ireo mpandray anjara ao Nouvelle-Calédonia dia maniry ny hiantoka ny fitazonana ny soatoavina ara-tontolo iainana sy ara-kolontsaina ao amin'ireo nosy maro. Anisan'izany fanamby izany ny famolavolana fomba handresena lahatra ny mpitsidika mba hitondra tena amin'ny fomba mendri-kaja manodidina ireo toerana ara-kolontsaina sy ara-tontolo iainana.
Koa satria ny indostrian'ny fizahantany any Nouvelle-Calédonie dia mbola tsy mivoatra, ny valan'aretina COVID-19 dia tsy nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny toekaren'ny firenena toy ny tranokala RRI hafa.
Mahaliana anay ny hahafantatra bebe kokoa momba ny kolontsain'ireo mpitsidika iraisam-pirenena. Ohatra, inona no andrasan'izy ireo amin'ny fijanonany, ary inona no antenainy ho vitany, mba hahafahantsika mamantatra ireo teboka azo ampiasaina amin'ny fitondran-tena. – Myriam Marcon, Mpanolo-tsaina GBRF any Nouvelle-Calédonie
Fampidirana amin'ny fitondran-tena sy ny mpitaona azy - Mark Boulet, BehaviourWorks Australia, Monash University
Mpilalao Rugby, Fish Boards, Facebook sy ny maro hafa toy ny Fiji Reimages Conservation fanentanana hanovana ny fenitra ara-tsosialy sy hamoronana fiovana maharitra - Scott Radway, cChange
Fitantanana sy Fiarovana - Fiona Merida, Manampahefana amin'ny valan-javaboary an-dranomasina Great Barrier Reef
Introduction aux comportements des visiteurs et ce qui les influencent – ​​Mark Boulet, BehaviourWorks Australia, Monash University
Les îles Fidji réimaginent les campagne de sensibilisation pour des changements de comportements durables – Scott Radway, cChange
Gestion sy fiarovana - Fiona Merida, Manampahefana amin'ny valan-javaboary an-dranomasina Great Barrier Reef
Ny Vahaolana Vahaolana dia natao hanentana ny fisainana, hampivondronana ireo mpitantana sy mpiara-miombon'antoka amin'ny fifanakalozam-pahalalana sy ny fianarana, ary hanampy amin'ny hetsika eny an-kianja. Ho an'izany tanjona izany, dia izao no mety ho dingana manaraka izay hita nandritra ny fifanakalozan-kevitra momba ny fiovan'ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany:
Fantaro ny fahafahana hifampizara hafatra momba ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany manerana ny toerana an-dranomasina UNESCO World Heritage.
Niaiky ny fizarazarana matetika ireo fanamby ireo, nisy ny fifanakalozan-kevitra momba ny mety hisian'ny fampivoarana hafatra iraisana manodidina ny fitondran-tenan'ny mpizaha tany manerana ny toerana an-dranomasina UNESCO Lova Iraisam-pirenena, indrindra ny fampiasana ny asa efa vita teo amin'ny Great Barrier Reef.
Mandehana any amin'ny pejy manaraka: Fahasamihafana ny fivelomana
Fizotry ny fandrindrana ny fifandraisana stratejika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiovan'ny fitondran-tena ho an'ny natiora: Fitaovana Siansa momba ny fitondran-tena ho an'ny mpitsabomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamantarana ny finoana fototry ny fitondran-tenan'ny mpitsidika
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGreat Barrier Reef Marine Park Authority Master Reef Guides